Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Social | Martech Zone
Ebe Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu
Fraịdee, June 1, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Kedu ihe dị mma ọdịnaya gị na-enweghị ike ịmekọrịta ọdịnaya ahụ? Ọ na-eju m anya mgbe ọ bụla m gụrụ peeji dị ịtụnanya ma enweghị bọtịnụ ịkekọrịta ma ọ bụ na-arụ ọrụ na-ezighi ezi. Ọ bụrụ na m pịa bọtịnụ nkekọrịta na aha na nkọwa ahụ esiteghị, ana m arụsi ọrụ ike ịme ndezi na ịkwanye ya ebe ahụ. Naanị m ịgbapụta… ndị na-agụ akwụkwọ furu efu!
Enweghị m bọtịnụ nkekọrịta niile na saịtị anyị. N'ime oge, achọpụtawo m ndị na-ewetara anyị ndị na-ege ntị kachasị mkpa ma ana m ahụ na m ji ha. Nke a bụ infographic nke na-agbagha ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti obodo dị n'azụ bọtịnụ ndị ahụ. Ka m na Elezie nye ndụmọdụ… nwale na ahụ maka onwe gị!
Social ringkekọrịta Button Ama egwuregwu infographic site Searchlọ Ọrụ Na-achọ Nchọgharị.
Tags: Facebookbọtịnụ facebookinshainshare bọtịnụLinkedInbọtịnụ njikọRedditbọtịnụ redditmmekọrịta mmadụ na ibe yaTwitterbọtịnụ twitter
Kedu ihe kpatara ndị mmadụ ji edo gị na Twitter